Bluboo X500 နှင့် Bluboo X500 Pro ဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ | Androidsis
Francisco Ruiz | | မိုဘိုင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုတွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားခြင်းမရှိသောရုပ်ပုံများရှိသည် ပထမ ဦး ဆုံးပေါက်ကြားပုံရိပ်တွေ အမှတ်တံဆိပ်ပြင်ဆင်နေကြောင်းအသစ်နှစ်ခုဆိပ်ကမ်း၏ Blubooတစ်ခုလုံး၏တင်ပြချက်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုနှစ်သက်သောအမှတ်တံဆိပ် ယူရို ၆၀ အတွက် 64-bit chip ပါသည့်စမတ်ဖုန်း.
ဤတစ်ကြိမ်တွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ဆိပ်ကမ်းအသစ်နှစ်ခု၏အလှည့်ဖြစ်သည် Blubooအထူးသဖြင့် Bluboo X500 နှင့် Bluboo X500 Proလာမည့်အောက်တိုဘာလတွင်ဖော်ပြမည့်နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူလာမည့်အောက်တိုဘာလတွင်စတင်မည့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် Android Terminal နှစ်ခု အထူးသဖြင့် Pro ဗားရှင်း ပရိုဆက်ဆာအဖြစ်ချီးကျူးထောပနာပါလိမ့်မယ်သော terminal ကို၏ Mediatek အားဖြင့် Helio X10။ Terminal နှစ်ခုလုံး၏နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များအားပြောပြရုံသာမကနောင်လာမည့်လများ၌ဆွေးနွေးစရာများစွာပေးမည့်ဤ Android terminal အသစ်နှစ်ခု၏ပထမ ဦး ဆုံးစီစစ်ထားသောပုံရိပ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပူးတွဲထားသည်။
Bluboo X500 နှင့် Bluboo X500 Pro တို့၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
အမှတ် Bluboo Bluboo
ပုံစံ X500 X500 Pro ကို
ဖန်သားပြင် ၅ လက်မအရွယ် JDI နည်းပညာနှင့် FullHD resolution ပါသော IPS ၅ လက်မအရွယ် JDI နည်းပညာနှင့် FullHD resolution ပါသော IPS
Processor ကို MTK6753 Octa core 1 GHz အမြန်နှုန်းနာရီ 6795'10 Ghz တွင် MTK2 Helio X2 Octa core ဖြစ်သည်
ရမ် 3Gb LDDR4 4Gb LDDR4
ရွမ် 16 Gb eMMC5.0 64 Gb eMMC5.0
ရှေ့ကင်မရာ ၁၃ mpx ၁၃ mpx
နောက်ကင်မရာ Sony MPX13 mpx 20'7 mpx Sony IMX220
သည်အခြား features တွေ ရှေ့မျက်နှာပြင်နှင့် 2.5D နည်းပညာဖြင့်လက်ဗွေရာအာရုံခံကိရိယာ ရှေ့မျက်နှာပြင်နှင့် 2.5D နည်းပညာဖြင့်လက်ဗွေရာအာရုံခံကိရိယာ
ဘက်ထရီ 3050 mAh လီသီယမ်ပေါ်လီမာ 3050 mAh လီသီယမ်ပေါ်လီမာ
စြေး ¿? ¿?
လွှတ်ပေး အောက်တိုဘာ 2015 ¿?
၀ ယ်ယူရန်အလွန်ကောင်းသောရွေးချယ်စရာနှစ်မျိုး မှလွဲ၍ Bluboo မကြာမီတင်ပြတော့မည့် Terminal အသစ်နှစ်ခုကိုသင်မည်သို့မြင်သနည်း။ အနည်းဆုံးစက္ကူပေါ်ရှိနည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူသူတို့သည် Android တွင်ထည့်သွင်းထားသည့် terminal ၏အစိတ်အပိုင်းတွင်အလွန်ကောင်းသော ၀ ယ်ယူမှုနည်းလမ်းအဖြစ်ဟန်ဆောင်ကြသည်။ အလယ်အလတ်တန်းစားနှင့်အခြားစျေးကွက်များ၌၎င်းင်းတို့၏ Terminal အသစ်များကိုပုံမှန်အားဖြင့်စျေးကွက်၌စတင်မိတ်ဆက်သောဤ Bluboo အမှတ်တံဆိပ်အသစ်သည် Android လောကတွင်၎င်း၏နေရာကိုရှာဖွေနေသော ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းထက်ပိုမိုမှာအရည်အသွေးမြင့်ဆိပ်ကမ်းစတင်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Bluboo မှပြင်ဆင်သောထုတ်ကုန်သစ်နှစ်ခုဖြစ်သော Bluboo X500 နှင့် Bluboo X500 Pro တို့၏စီစစ်ထားသောပုံရိပ်များကိုကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်ပြောပြပါမည်။
၎င်းသည် @oneplus2အနည်းငယ်ကိုသတိပေးသည်
ဤ Bluboo သည် OnePlus Two နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းကိုဖန်တီးရန်ငွေအလုံအလောက်မရှိပါသလား။ အွမ် ...
ကျွန်ုပ်တို့သည်သီးခြားယုံကြည်စိတ်ချရသောရင်းမြစ်မှရုပ်ပုံများကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အကယ်၍ ဒီဇိုင်းသည် OnePlus2နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်မှန်လျှင်၊ သင်ဖန်သားပြင်၏ curvature နှင့်နောက်ကျောကိုကြည့်လျှင်၎င်းသည် terminal တစ်ခုတည်းမဟုတ်ကြောင်းတွေ့ရလိမ့်မည် ။
အဘယ်ကြောင့် 5″? ဘာကြောင့်လဲ5fashion ဖက်ရှင်ယန္တရားပျက်နေပြီ။ ကြည့်ရတာကောင်းပါတယ်။ ငါဒီတရုတ်ထုတ်လုပ်သူတွေကိုတွေ့တဲ့အချိန်ကတည်းကစျေးနှုန်းကိုစောင့်ဖို့သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးမိုဘိုင်းဖုန်းကိုစျေးသိပ်မကြီးတဲ့ဈေးနဲ့စတင်ရောင်းချတယ်။
Tag Heuer က၎င်း၏ Android Wear စမတ်နာရီကိုနိုဝင်ဘာ ၉ ရက်တွင်ဒေါ်လာ ၁၈၀၀ ဖြင့်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်